တက်ရောက်သူလမ်းညွှန် - ဖလော်ရီဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုပြပွဲ
တည်နေရာ၊ ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံ
စာနယ်ဇင်း / မီဒီယာ
ဖလော်ရီဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မေးကောင်းမေးနိုင်သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုမည့်အထောက်အကူပြုအချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဖလော်ရီဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲသည် ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆ ရက်အင်္ဂါနေ့မှ ၂၀၂၁ မတ် ၁၈ ရက်ကြာသပတေးနေ့အထိဖြစ်သည်။
ပွဲတော်အချိန်သည်နံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၆း၀၀ အထိအရှေ့ပိုင်း (ET) ဖြစ်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇုန်များတွင် visitors ည့်သည်များထားရှိရန်ပြနာရီပြီးနောက် Virtual ပလက်ဖောင်းလက်လှမ်းလိမ့်မည်။ သင်ဤပြခန်းများတွင်ပြခန်းများသို့လာရောက်လည်ပတ်သူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
“ Log In” ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏စကားဝှက်ကိုမမှတ်မိနိုင်ပါက login စာမျက်နှာရှိ“ မေ့ထားသောလျှို့ဝှက်နံပါတ်” link ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါမှမဟုတ်သွားပါ https://expo.floridaexpo.com/forgotpassword။ မေ့နေသောလျှို့ဝှက်နံပါတ်သည်သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုတောင်း။ စကားဝှက်ပြန်လည်သတ်မှတ်ထားသောလင့်ခ်ဖြင့်အီးမေးလ်တစ်ခုပို့လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကို (သို့) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
အလည်အပတ် https://www.floridaexpo.com/ အချိန်မရွေးမှတ်ပုံတင်ရန်! visitors ည့်သည်များအတွက်မတ်လ ၁၈ ရက်ကြာသပတေးနေ့မှည ၁၂း၀၀ နာရီအထိမှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။
အီးမေးလ်ပို့ ကျေးဇူးပြု. support@nextechar.com ဝက်ဘ်ဆိုက်ပြvideoနာများဖြစ်သည့်ထိုကဲ့သို့သောဗွီဒီယိုကြားခံခြင်း၊ စကားဝှက်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း (သို့) အခြားအထွေထွေကွန်ရက်စာမျက်နှာပြnavigationနာများအတွက်အကူအညီအတွက်။ ယေဘူယျအဖြစ်အပျက်အထောက်အပံ့အတွက်ဆက်သွယ်ပါ floridaexpo@enterpriseflorida.com.
ကုန်စည်ပြပွဲကိုအောင်မြင်စွာမှတ်ပုံတင်ပြီးပါကတက်ရောက်သူများကို“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” စာမျက်နှာဆီပြန်ပို့လိုက်ပြီးအခု virtual virtual platform ကိုချက်ချင်းဝင်ရောက်တော့မည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်နောက်ကုန်စည်ပြပွဲမတိုင်မီအပတ်တိုင်းအခြားဆက်သွယ်ရေးများနှင့်အတူကျေးဇူးတင်သည့်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့လိမ့်မည်။
အဖြစ်အပျက်ကာလအတွင်းပလက်ဖောင်းကိုသွားခြင်း (မတ်လ ၁၆ ရက်မှ ၂၀၂၁ အထိရနိုင်သည်)
ပြသသူအပေါ် မူတည်၍ သင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများစွာတွေ့လိမ့်မည်။ ပြခန်းသို့သွားရန်ဘယ်ဘက်လမ်းညွှန်မှ Exhibit Grand Hall ကိုရွေးပြီးသင်ကြည့်ချင်သောပြခန်းကိုနှိပ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်အသံပါသောဗီဒီယိုများသည်အာရဗီ၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ ပေါ်တူဂီနှင့်စပိန်ဘာသာစကား ၆ ခုကိုထောက်ပံ့ထားသည်။
Grand ပြပွဲခန်းမတစ်ခုစီတွင်ကုမ္ပဏီအမည်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် / သို့မဟုတ်သော့ချက်စာလုံးများဖြင့်သင်ရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်။
ဟုတ်တယ်။ ပါဝင်သည့်ခန်းတစ်ခုစီ၌သင်ဆက်သွယ်နိုင်သောစကားပြောခန်းတစ်ခုပါရှိသည်။ chat box များအပြင်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းအပြင်ပြသသူများ၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများဒီမှာ -
INFO - ကုမ္ပဏီဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ပါ။
ဆက်သွယ်ရန် - အဆက်အသွယ်ကဒ်အချက်အလက်ကိုကြည့်ရှုပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
LIVEMEETING - ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုတွေ့ဆုံမှုသို့တိုက်ရိုက်သွားပါ။
ပြက္ခဒိန် - ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်နှင့်တစ် ဦး ချင်းတွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ပါ။
အရင်းအမြစ်များ - ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ငါဒီမှာရှိခဲ့တယ်! - သင်ပြသမည့်သူကိုသင်ပြသသူကိုအသိပေးပါ။ အချို့သောပြခန်းများသည်ထိုသို့ပြုခြင်းအတွက်အပိုဆောင်း raffles ဆုများပင်ပေးနေသည်။
ဟုတ်တယ်။ ဖြစ်ရပ်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၃၀ ခန့်တွင်၊ သင်ဆိုက်ထဲ ဝင်၍ ၀ ယ်လိုအားရှိသည့်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း၊ ပြခန်းများ၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောပစ္စည်းများနှင့်အခြားအရာများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
တင်ဆက်မှုတစ်ခုလုံးတွင်မေးခွန်းများမေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ဖန်သားပြင်အောက်တွင်တွေ့နိုင်သောမေးခွန်းဘားရှိလိမ့်မည်။ အဆုံး၌ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်မေးခွန်းနှင့်အဖြေတွင်မေးခွန်းများ (အချိန်ခွင့်ပြုသည်) ကိုဖြေကြားလိမ့်မည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ပြသနာများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆွေးနွေးမှုများအတွက်သူတို့နှင့်တစ် ဦး ချင်းတွေ့ဆုံရန်တောင်းဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်တွန်းပါသည်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တွေ့ဆုံခြင်းကိုစီစဉ်ရန်တဲတစ်ခုစီ၏အောက်ခြေရှိအပြာရောင်ဘားတန်းရှိပြက္ခဒိန်အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပြီးထိုတွင်ပါရှိသောညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ အစည်းအဝေးများကိုစီစဉ်ရန် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လ ၁၆ ရက်မှ ၁၈ ရက်အကြားပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပြသသူ၏အချက်အလက်နှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ် download လုပ်လို့ရပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်နှစ်သက်သောဖိုင်များနှင့် e-business ကဒ်အားလုံးကိုသင်သိမ်းဆည်းပြီးသင်၏စက်ထဲသို့သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
event platform ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးလို့ရပါသလဲ။
ဖြစ်ရပ်ပြီးနောက်ရက် ၃၀ အထိပလက်ဖောင်းနှင့် OnDemand ပါဝင်မှုကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇုန်ရှိ visitors ည့်သည်များထားရှိရန်ပြနာရီပြီးနောက် virtual platform ။ သင်ဤပြခန်းများတွင်ပြခန်းများသို့လာရောက်လည်ပတ်သူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးသောကုမ္ပဏီများမှသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကိုကြည့်ရှုရန်စာနယ်ဇင်းခန်းသို့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်တွန်းပါသည်။
© 2021 Florida International Trade Expo ။ WordPress ကို အသုံးပြု၍ အခမဲ့ပြုလုပ်ထားသည် Colibri